Realme waxay soo dirtay 10 milyan oo taleefannada casriga ah adduunka oo dhan muddo 14 bilood gudahood ah | Androidsis
Realme waxay soo dirtay 10 milyan oo taleefannada casriga ah adduunka oo dhan muddo 14 bilood gudahood ah
Realme waa mid ka mid ah shirkadaha soo saara taleefannada casriga ah ee waayahan dambe soo kordhay. Shaki la'aan, ka go'aanka oppo, taas oo ahayd in laga dhigo mid madax-bannaan, waxay aad ugu fiicnayd lambarrada iibka ee shirkadda, iyo sidoo kale ballaadhinteeda dhulalka kale - oo ay ku jiraan Shiinaha y Europa-.
Astaanta ayaa jabisay dhammaan qorshooyinka Hindiya, suuqa ugu weyn. Halkaas waxay ku raaxeeysataa aqbalaad wanaagsan iyo soo dhaweyn macaamiisha ah, waana sababta ay uga mid tahay shirkadaha moobiillada ugu horreeya dalka. Waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah inay kala-duwanaatay istiraatiijiyaddeeda, oo aan halkaas ku bixinaynin oo keliya, laakiin sidoo kale waddammada kale tan iyo waqti aan fogayn, rarkeedu aad ayuu u kordhay, sidaa darteed, ilaa maanta, diiwaanka 14 bilood, waxay ku guuleysatay inay rarto 10 milyan oo qalab ah. Xaqiiqdii, waqtiga daabacaadda maqaalkan, jaantuskan mar hore ayaa la dhaafay.
Weibo waa shebekadaha ugu caansan Shiinaha ee shebekadaha bulshada oo dhan taas oo shirkaduhu inta badan sameeyaan ogeysiis iyo teas. Tan iyada oo loo marayo, Realme ayaa sii deysay warka weyn.
Waxqabadka ayaa la qabtay intii u dhaxeysay May 16, 2019, markii Realme 1 la bilaabay, iyo maanta. Guud ahaan, shirkaddu waxay iibin jirtay qiyaastii 22,000 oo taleefannada casriga ah maalin kasta, laakiin way cadahay inaysan sidaas u shaqeynaynin, maadaama tirooyinka dhabta ah ay saameeyeen maalinta iyo waqtiyada sanadlaha ah.
Runtii wuxuu doonayaa inuu sii wado koritaanka, wuu sameynayaa wuuna ku sii socon doonaa. Qorshayaasheeda ku aaddan suuqgeynta Shiinaha, tijaabo ahaan, waa la dhammaystiray, sidoo kale ballaadhintiisa Yurub oo dhan ayaa socota. Meeshii aan weli aad u joogin waa Koonfurta Ameerika iyo Waqooyiga Ameerika, laakiin waxaan dhowaan heli karnaa wararka ku saabsan kala-firidh suurtagal ah oo ku baahsan qaaradda weyn ee la kala qaybiyay. Waxaa laga yaabaa in dhowr bilood ama sannado gudahood aan arki doonno Realme oo adduunka oo dhan ka joogta, sida Huawei, Xiaomi ama Samsung.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Realme waxay soo dirtay 10 milyan oo taleefannada casriga ah adduunka oo dhan muddo 14 bilood gudahood ah
Fosil Gen 5: Saacadaha cusub ee Wear OS
Xarfaha alifbeetada ayaa ka sarreeya shirkadda Apple oo waxay noqotay shirkadda ugu lacagta badan adduunka